သင့်ရဲ့ Grenade Skill တွေ တိုးတက်စေဖို့ ဒီ​ Free Fire လမ်းညွှန်ကို ဖတ်လိုက်ပါ | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire သင့်ရဲ့ Grena...
သင့်ရဲ့ Grenade Skill တွေ တိုးတက်စေဖို့ ဒီ​ Free Fire လမ်းညွှန်ကို ဖတ်လိုက်ပါ
Free Fire မှာ Grenade (လက်ပစ်ဗုံး)​ သုံးတာ ကျွမ်းကျင်ရင် ကစားသမားနဲ့ အဖွဲ့၀င်တွေအတွက် ဂိမ်းထဲမှာ ခြေတစ်လှမ်းသာစေပါတယ်။ ရန်သူရှိတဲ့နေရာကို ရမ်းသမ်းပြီး လက်ပစ်ဗုံးကြီးကို ပစ်တာလောက် မရိုးရှင်းပါဘူး။ တစ်ချို့ဆို သူတို့ အိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာတောင် မေ့နေကျပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို သုံးရမယ်ဆိုတာသိသင့်ပါတယ်။ သင် Grenade ပစ်တာတော်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့​ရဲ့ လမ်းညွှန်ကို ဖတ်လိုက်ပါ။
Free Fire မှာ Grenade က ပစ်လိုက်တာက နေရာကျယ်ကျယ်၀န်း၀န်းကို Damage ဖြစ်စေပါတယ်။ ရန်သူတွေ ပုန်းနေတဲ့နေရာကနေ မျှားထုတ်နိုင်ပြီး လန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်သလို သူတို့ရဲ့ ကားတွေကို လဲဖြတ်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Grenade က အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုလို့ပြောရင်လဲ မမှားပါဘူး။
လက်ပစ်ဗုံးကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ?
လက်ပစ်ဗုံးထည့်တဲ့ နေရာလေးက ဘယ်ဘက်ထောင့် Medkit အောက်နားမှာရှိပါတယ်။ လက်ပစ်ဗုံးကို ရရှိတာနဲ့ Fire/Grenade ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး အနီရောင် Tracer လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အသံအကျယ်ကြီး တစ်ခုထွက်လာဖို့ ပေါက်ကွဲသွားတာကို စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူတွေကို ထိခိုက်စေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဗုံးကို ဖွင့်ပြီးမှ ပစ်ပါ။ လက်ပစ်ဗုံးတွေကို အလကား မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကျဆုံးနေတဲ့ ရန်သူတွေကို လက်ပစ်ဗုံးမြန်မြန်ပစ်ပြီး သတ်လိုက်ပါ။
ပုံမှန်သေနတ်ကိုပြန်ပြောင်းဖို့ Screen ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Weapon Hub လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Free Fire မှာ ရှိသော လက်ပစ်ဗုံး အမျိုးအစားများ
ဂိမ်းထဲမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးအတွက် လက်ပစ်ဗုံး အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လက်ပစ်ဗုံး တစ်ခုချင်းစီ အကြောင်းဖတ်လိုက်ရအောင်နော်။
၁။ Grenade ။ ဒီ​ရိုးရိုး လက်ပစ်ဗုံး ကတော့ ပေါက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ လက်နက်ဖြစ်ပြီး အနီးမှာရှိတဲ့ လူတိုင်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကို သုံးပြီးရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ဖြိုခွဲလိုက်ပါ။ လက်ပစ်ဗုံး ကို ပေါက်အောင် အရင်စောင့်ပြီးမှ ပစ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ Gloo Wall Grenade. ဒါကတော့ အသုံးပြုသူကြည့်နေတဲ့ဖက်ကို မြေကြီး ကာဖို့ နံရံသေးသေးလေးဖြစ်စေပါတယ်။ ကစားသမားတွေက Gloo Walls ၃ ခုအထိသုံးနိုင်ပြီး အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ အလိုလျောက်ပျောက်သွားတာပါ။ ဒါက အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်လို့ အမြဲသယ်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါဘဲ။
၃။ Flashbang. ရန်သူတွေကို Flashbang နဲ့ ခဏတာ မျက်လုံးမမြင်ရအောင်လုပ်လိုက်ပါ။ အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့သူတစ်ချိုဆို ခဏတာနားမကြားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါက သေချာသုံးရင်အလွန်ကောင်းတဲ့ လက်နက်တစ်ခုပါ။ ရန်သူတွေ မမြင်ရခင် ပစ်လိုက်ပြီး သတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးရင်သေချာတော့ ဂရုစိုက်ပါနော်။ အခက်မသင့်ရင် သင်ပါထိနိုင်လို့ သင်နဲ့ ဝေးနေရာကိုပစ်ပါ။
၄။ Smoke Grenade. ဒီ ပစ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်လက်နက်တစ်ခုကတော့ အငွေ့တွေထုတ်ပေးပြီးတော့ သင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ရန်သူတွေက သင်ကို မမြင်ရတော့ဘူးလေ။ Smoke Grenade နဲ့ ရန်သူတွေ မ Aim နိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး အကာအကွယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၅။ Decoy Grenade. ဒီတစ်ခုကတော့ သိပ်ကိုပါးနပ်ပါတယ်။ ဒီ​ Decoy Grenade က Gloo Wall လိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာရင် ပျောက်သွားတဲ့ ကစားသမားအတုတွေ ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရန်သူတွေအမြင်ရှုပ်အောင်လုပ်ပြီး အနိုင်ယူလိုက်ပါ။
၆။ Brick Grenade. ဒီထူးခြားတဲ့ Item ကို သုံးပြီး အုတ်ခဲ Tower ကြီးကို ရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာမှာ ဆောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Hook လေးသုံးပြီး Tower ပေါ်တက်နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ Sniper Tower အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာရင် Tower က ပျောက်သွားနိုင်သလို ရန်သူတွေ တိုက်ခိုက်ရင်လဲ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
Grenade အကြောင်းသိကောင်းစရာများ နှင့် လှည့်ကွက်များ
အများအားဖြင့် Grenade တွေကို သတိမထားမိသလို မေ့မေ့နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အသုံးပြုရင်တော့ တိုက်ခိုက်တာကော ကာကွယ်တာမှာပါ အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
လက်ပစ်ဗုံး အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ကို သိထားပါ။ သင့် ရန်သူတွေ ပုန်းနေတဲ့နေရာကနေ ထွက်လာအောင် လက်ပစ်ဗုံးတွေ အသုံးပြုပါ။ ဒါကသင့်ကို ပစ်ခတ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေး အလိုအလျောက် ပေးမှာပါ။
Gloo Wall လုပ်နေချိန် Crouch လုပ်တာကိုလေကျင့်ပါ။ ဒါမှ Headshot မပစ်ခံရမှာပါနော်။ ဒီလိုလုပ်ရင် Gloo Wall ထားတာပိုမြန်သလို ပိုလဲတိကျပါတယ်။
Pets တွေနဲ့ Gloo Wall ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Robo ရဲ့ Wall Enforcement Skill တွေက Gloo Wall မှာ ကာကွယ်မှု Shield လေးပေးပြီး HP လဲ ပိုရစေလို့ ဖြတ်ဆီးဖို့ပိုခက်စေပါတယ်။ Mr. Waggor က Gloo Wall ပိုပေးပါတယ်။
Frag grenade ကိုသုံးပြီး Gloo Wall နဲ့ပုန်းနေတဲ့ ရန်သူကို Knock Out သို့မဟုတ် သတ်နိုင်ပါတယ်။
ရန်သူတွေက သင့်နောက်လိုက်နေတယ်ဆိုရင် Grenade ပစ်ပြီး သူတို့ကို နှေးစေပါတယ်။
Grendae ကို ပေါက်ဖို့ စောင့်နေချိန်မှာ ခုန်နေပါ။ ဒါမှ ၀ေး၀ေးကို ပစ်နိုင်မှာပါ။
Heal ဖို့ အမြန်လိုနေပေမယ့် ကျဥ်တွေတောက်လျောက်လာပစ်ခံနေရပါသလား? ရန်သူတွေကို Smoke-Bomb နဲ့ ပစ်ပြီး လုံခြုံတဲ့ နေရာကို ပြေးပြီး Medkits တွေ သုံးလိုက်ပါ။
Grenade ကို အပေါ်နားကနေပစ်ပါ။ ပိုတည့်အောင်။
Squad Match တွေမှာ ရန်သူတွေက အိမ်ထဲမှာ ပုန်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို အိမ်ထဲမှာ ချောင်ပိတ်အောင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ Grenade တွေ ကို ပြုတင်းပေါက်ကနေပစ်ပါ။
Gloo Wall တွေက သင်ထင်တာထက်ကို ပိုကောင်းပါတယ်။ သင်ပြုတ်ကျရင် သုံးနိုင်သလို ရန်သူတွေစီကနေ ကာနိုင်ပါတယ်။ ရန်သူတွေစီ Grenade လေး ပစ်ပြီး အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ Free Fire အကောင့်ကို Codashop နဲ့ သာဖြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ပိုမို စိတ်ချ မြန်ဆန်စွာ ငွေဖြည့်ပြီး ငွေပေးခြေမှုများစွာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleFree Fire ရဲ့ ၀ူခုန်း လမ်းညွှန်: All Hail the Monkey King!
Next article#GirlSquad မှာဘယ် မိန်းကလေး Gamer ပါဝင်သင့်သလဲ?